बेसारपानीको भर नपरेर चाँडो अस्पताल ल्याएको भए बुवा बाँच्नुहुन्थ्यो कि! – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/बेसारपानीको भर नपरेर चाँडो अस्पताल ल्याएको भए बुवा बाँच्नुहुन्थ्यो कि!
बुवाको निधन भएकोबारे आमालाई जानकारी दिइएको थिएन। केहीबेर अगाडि बुवालाई हेर्न आमालाई लगेर ल्याइएको थियो। तर आमाले बुवा हुनुहुन्न भन्ने अनुमान गरिसक्नु भएको रहेछ। रोइरहनुभएको थियो।
भोलिपल्टको कुरा हो। हामीलाई राखेको ठाउँ नजिकै स्टोर रूममा मैले तीन वटा शव देखेँ। ती शवहरू हेर्दा एउटामा बुवाको नाम लेखेको रहेछ। मैले बुवालाई पानी चढाएँ। पानी खुवाइदिएँ। बत्ती बालेँ।
केहीबेरमा नेपाली सेनाहरू शव लैजान भन्दै आए। बुवाको शव भएको ठाउँमा आमा पनि आउनुभयो। बुवाको खुट्टा ढोग्नुभयो। बुवाको अन्त्येष्टिमा म जान पाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग सुनुवाइ भएन। म जेठो छोरा हुँ। हाम्रो आफ्नै हिन्दु संस्कार पनि छ।
हामी आइसोलेसनमा बसिरहँदा डाक्टर, नर्स आउनुहुन्छ। म रोइरहेको छु भने पनि मेरो आँशु पुछिदिनुहुन्छ, नरून र कमजोर नहुन सम्झाउनुहुन्छ। चिकित्सकहरू कोरोनाका बिरामीसँग डराउनुहुन्न। पिपिईलगायत सुरक्षाका उपाय लगाउनुभएको हुन्छ।
स्रोत : (श्रेष्ठसँग सेतोपाटीका प्रशन्न पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्शा सार्वजनिक (भिडिओसहित)